watchOS 7.0.2 Iyezvino Inowanikwa Kugadzirisa Apple Tarisa Bhatiri Matambudziko | Ndinobva mac
watchOS 7.0.2 yave kuwanikwa kugadzirisa Apple Bhatiri matambudziko
Kweinoda kusvika mwedzi, isu tatova nezvatinazvo mavhezheni matsva eIOS, watchOS, tvOS ... shanduro dzakatotanga kugamuchira dzakasiyanaKugadziridza kurongedza kwekutanga malfunctions, chimwe chinhu chinowanikwa mune dzese dzekupedzisira shanduro dzinotangwa pamusika.
Chokupedzisira chishandiso chakagashira iyo yekuvandudza ndeye Apple Watch, chishandiso icho chingori changotambira watchOS 7.0.2, vhezheni inotarisa kugadzirisa yakanyanya bhatiri kunwa yakatambura, pamusoro pekugadzirisa dambudziko rakaburitswa nemimwe michina ine basa reECG, basa risina kushanda kunyangwe richiwanikwa.
Dai iwe uri mumwe wevashandisi vakaona mabhatiri eApple Watch yavo akadonha nekukurumidza, yatove kutora nguva yekuisa iyi nyowani yekuvandudza, yekuvandudza iyo zvinoenderana nemodeli inotora yakawanda kana shoma nguva yekumisikidza. Mune zvinyorwa zvekuvandudza, kusiyana nedzimwe nguva, Apple haina kudoma kuti ndezvipi / zvikonzero nei bhatiri reApple Watch raikurumidza kukasira.
Nekuuya kwehope yekutarisa mashandiro, vazhinji vaive vashandisi avo vanga vajaira kupfeka Apple Watch pavanorara pane kuisiya ichichaja husiku hwese. Kana tikasimuka kubva kuhope, bhatiri rakadzikiswa ne30 kana 40%, isu tinomanikidzwa kudzoreredza chishandiso, saka pakupedzisira, vashandisi vanomira kushandisa iko kushanda kuti vakwanise kunakidzwa neApple zuva rese reWatch.
Izvo zvakare hazvitsanangure chikonzero nei basa reECG rakanga risingawanikwe. mune vamwe vashandisi kunyangwe zvaive zviripo munyika. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti kuApple kupa iyi mashandiro munyika, inofanira kutanga yawana mvumo kubva kuchipatara chinodzora agency yenyika yega yega, mashandiro ayo anowanikwa mune dzinopfuura nyika makumi mashanu nhasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » watchOS 7.0.2 yave kuwanikwa kugadzirisa Apple Bhatiri matambudziko
Tevera nesu nhasi chiitiko cheiyo iPhone 12
Iyo 2021 Honda Accord ichaenderana neCar Play mune isina waya modhi